လက်လှမ်း CDG လိင်ဂိမ်းများယခု
လျှင်သင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်အားလုံးအတွက်အင်တာနက်ကျော်အရပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အလွန်ကြီးစွာသော CDG လိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်၊အကွောငျးကောင်းသောအခွင့်အသင်ချစ်ကြတာပေါ့အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့ရရှိနိုင်သောရှိသည်။ ကတည်းကဖွဲ့စည်းကျွန်တော်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၊ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့နာရီတဝိုက်ကိုရောက်စေဖို့အ horniest ဂိမ်းကစားထွက်ရှိသုံးစွဲဖို့အပူဆုံးစီမံကိန်းမှလူသိများယောက်ျားနှင့်အမှန်တကယ်သက်သေပြဖို့အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဒီအာကာသ။, ကျွန်တော်ဖွင့်ချပညတ်တရား၏မြေယာနှင့်ယခုအဆင်သင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်မည်သူမဆိုလိုလားလာရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အကိုက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်–ဒါကြောင့်ဝေး၊ဒါကြောင့်တူလှပါတယ် CDG လိင်ဂိမ်းများသည်ဒီမှာထွက်အားလုံးတစ်ဦးတည်း၏ထိပ်မှာအစားအစာကွင်းဆက်။ ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်တောင်းဆိုမှုအောင်မြင်မှရလာသောအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်ကောင်းစွာ၊ကြကုန်အံ့ဟုဆိုလျှင်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရကစားအချို့ဒဏ္ဍာခေါင်းစဉ်ခင်အများဆုံးအခြားဂိမ်းကစားထွက်ရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းရဖို့၊ကျနော်တို့အသွား-မှအစက်အပြောက်။, အသင်းမှာ CDG လိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်တစ်ခုသက်သေမှတ်တမ်းအတွက်အာကာသနှင့် overstate ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်နိုင်စေဖို့တင်ပြဖို့ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စုဆောင်း၏ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းအကောက်ခွန်များအတွက်လုပ်သင့်လိင်ဆန္ဒ။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူစိတ်ဝင်စား? ထို့နောက်အောက်တွင်ဖတ်ပါ:အပေးမယ်အပြည့်အဝအသေးစိတ်အရာကို CDG လိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်!
ယုံ XXX ဂရပ်ဖစ်
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးထူးခြားသောအင်္ဂါဒီနေရာမှာတကယ်ရောင်းအဆိုပါခြုံငုံအထုပ်မှဂိမ်းကစားနှင့်အတူတစ်ဦးစိုက်ထူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရပ်ဖစ်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း။ ကိုယ့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်မှာပျမ်းမျှအရည်အသွေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း–အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားနိုင်ရန်အတွက်အဲဒီခေါင်းစဉ်များအဖြစ်အယုံအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? ကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတွက်မဟာဗျူဟာကိုထည့်လေ့မရှိကြောင်းအမြင်အာရုံဗေဒ၏ဘွဲ့ထက်အခြားအရာအားလုံးနှင့်ဤသို့ဝေး၊ဒါကြောင့်တကယ်ပေးဆောင်ငွေချေ။, ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်အလုပ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူများအားလျော်ကြေးသူတို့ကိုအညီ–ကကျေးဇူးတင်စကားယောက်ျားတွေကျနော်တို့ဟာသူတို့အဘို့၊ဒါကြောင့်ကောင်းစွာရရန်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောပြန်လာပြီး! သူတို့အလုပ်အတော်လေးခဲယဉ်းပြပွဲအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကြောင်းမျိုးဆက်သစ်ဂရပ်ဖစ်ဒီမှာအခုအချိန်မှာအတွက်ညစ်ညမ်း။ ကျွန်မတို့သံသယဖြစ်၏မည်သူမဆိုအတွက်ခေတ်ရေစီးအာကာသရှိခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်ကြည့်သောအဖြစ်ကောင်းဖြစ်ငါတို့ဥစ်–အံ့ဒေသတွင်းမှကမ္ဘာ၏ညမ်း!, လို့ပြောလုံလောက်လျှင်သင်၏ပျမ်းမျှရှာဖြန့်ချိသောမလုပ်လည်းကောင်းစွာမျက်စိပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်အတိအကျအားသာချက် CDG လိင်ဂိမ်းများကျော်ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတိုင်းမှသင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးဒီမှာအဘယ်အရာကိုမြင်အနာဂတ်၏CDG လိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွှန်တော်အစဉ်အမြဲပြသတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာဗျူဟာများ၏အရည်အသွေးသည်အကောင်းဆုံးတယောက်ကိုမှချမှတ်!
အဲရဲ့တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်လိုထွက်ရှိအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်၊နှင့်အစဉ်ငါတို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုအတွက်လုံလောက်သောထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်ပျော်စရာ၏နာရီ၊ဒါကြောင့်အခုထိအမှုဖြစ်ကြောင်းလူတွေပြန်လာဒီမှာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အရကိုယ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သောဆေးထိုး၏ကောင်းသောအသက်တာ။ ဘာမှမရှိဘူးအထူးသဖြင့်အနားမှကြွလာသောအခါထုတ်လုပ်မှုလွဲသောအခါကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေတဲ့ဂိမ်း၊ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး–ငါအတိုအချည်း၏လက်ခံမည်ဖြစ်! ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့သိုလှောင် ၅၅ ဘွဲ့၊ဒါပေမယ့်အသစ်တစ်လုံးလွှတ်ပေးရန်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တလတခါ။, ပါကကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇယားကိုလုံးဝပေါ်မူတည်သည့်အခါကျွန်တော်ထင်ဂိမ်းတစ်ခုအမှန်တကယ်သင့်လျော်သောခံရဖို့ထွက်ထားရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမယုံကြည်တဲ့ဂိမ်းပြုသောအမှုနှင့်အဆင်သင့်လူထုများအတွက်၊ထိုသို့ဖြစ်ရမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအမှုအချက်ကိုအကြောင်းထုတ်လွှတ်တဲ့ဂိမ်းစောလွန်းဝေးထက်ပိုဆိုးသိပ်နောက်ကျ! ငါတို့သည်လည်းကြည့်ဖို့ freshen တက်ရင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါရရှိနိုင်ပါသည်:ဒါဟာငါတို့၏ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း CDG လိင်ဂိမ်းများတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဖြစ်လာမကုန်မည်သည့်ဂိမ်းအပုပ်၊အထူးသဖြင့်ကတည်းက၊ပိုပြီးမကြာခဏမထက်၊ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပြန်ထည့်လျက်ဆေးသုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းထက်အသစ်တည်ဆောက်သူများကုတ်ခြစ်ရာမှ!, အသင်းလည်းရွေးတွင်းအကြောင်းသင်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ပါတော့တယ် freshener၊အမဲစေကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုသိစေ!
တဦးတည်း၏အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်များ၏အတွေ့အကြုံမှာ CDG လိင်ဂိမ်းများသည်အကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအဖြစ်သီးသန့်။ အဘယ်သို့ငါဒီနားမှာဆိုလို၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ–အများကြီးရှိပါတယ်ပလက်ဖောင်းများထွက်ရှိပါသည်ချင်သောဝယ်ယူရန်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အထို့နောက်သူတို့ကိုမျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်:သော်လည်းမပျံသန်း။ အဘယျသို့ကဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းသင်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ပါပြီ၊အသင်လိုအပ်မယ့်လုပ်နေဖို့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဒီမှာ။ ကျနော်တို့ဟာအလွန်လျှို့ဝှက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကောင်းစွာ၊ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်သည်တန်ဖိုးတွေအများကြီးထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်း!, ကျနော်တို့မပေးချင်ကြဘူးသူတို့အခွင့်အလမ်းဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့ရှုပ်ထွေးပြီးအရာအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ၊ဒီတော့အင်း:ချင်ပါလိမ့်မယ်ပူးပေါင်းပြီးပျော်မွေ့ချင်လျှင်သင်အဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်လည်းကျနော်တို့နိုင်င်ဖို့တွန်းထုတ် hotfixes နှင့်အထွေထွေထေးအများကြီးတစ်ငရဲထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အများစုဟာအခြားနေရာများ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒီဂိမ်းဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့သက်သက်သာသာ-လံုးခ်င္း–ကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်ထိန်းချုပ်မှုကျော်ကအားလုံးကို!
အထုပ်အပေါ် CDG လိင်ဂိမ်းများ
ငါထိုင်နိုင်ဒီမှာရေး ၅၊၀၀၀ စကားလုံးအပေါ်အဘယ်အရာကို CDG လိင်ဂိမ်းများဒါမင်းအတွက်ကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖုံးလွှမ်းအဓိကအစိတ်အပိုင်းလိုအပ်သောခံရဖို့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်နိုင်တစ်လျောက်ပတ်သောအတွေးအကြှနျုပျအဘို့တစ်ချိုးယူရှိနိုင်အောင်လုပ်ငန်းစဉ်ဘာပြီဆိုသည်နှင့်၊မျှော်လင့်၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးကိုယ်အဘို့အဒါကြောင့်သင်သွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သောအခြားအစက်အပြောက်ထွက်ရှိပြီးအင်း–သူတို့မသိဘူးသူတို့ဘာတွေလုပ်နေ။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤအချက်ကို၊ကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ပေးလှူဖို့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်အရှိန်အ CDG လိင်ဂိမ်းများမှာတကယ်တိုက်တွန်းဖို့ယူ။, ကျေးဇူးအများကြီးတင်သည်တစ်လျှောက်လာမယ့်နေ့–လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူးသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နှင့်ပျော်မွေ့ CDG လိင်ဂိမ်းများကိုယ့်အဖြစ်ကြှနျုပျတို့ပွုပါ! စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင် jerking၊မိတ်ဆွေ။